Namuhla iTunisia ithakazelisa abantu abaningi. Enye - izinto zayo, enye-ulwandle. Kunoma yikuphi, amashumi ezinkulungwane zezivakashi eze lapha minyaka yonke. Wonke umuntu ukhetha ihhotela ukuze anakekele, futhi abaningi bayeke e-Iberostar Mehari 4 *. Ngingathanda ukutshela ngaleli hotele.
Kutholakale i-Iberostar Mehari 4 * esiqhingini sase-Djerba, esiseGulf of Gabes, esiseduze nolwandle. Umzana ubizwa nge-Tagermess. Kuseduze kakhulu nomuzi omkhulu waseHoumt-Suk. Kuthatha cishe imizuzu engu-20 ukuya esikhumulweni sezindiza. Ngendlela, ngokuphambene nehhotela kukhona isitimela sebhasi, ngakho-ke izivakashi akudingeki ukuthatha itekisi ukuya endaweni ethile.
Azikho izindawo eziningi ezithakazelisayo, kodwa zikhona. Kungakapheli imizuzu emithathu ungena epulazini lezingwenya, epaki "Djerba Explorer" kanye ne-ethnographic museum Lalla Hadriya. Futhi eduze kwehhotela - izitolo ezinkulu, izitolo nezitokisi zokukhumbula. Ngokuvamile, ingqalasizinda yezokuvakasha lapha ithuthukiswe kahle, edlala ezandleni zezivakashi eziningi.
Iberostar Mehari 4 * inakho konke okumele kube khona kunoma iyiphi ihhotela elihle. I-Wi-Fi esheshayo esheshayo, ukupaka okuzimele, ukuqashisa imoto, ukukhangisa ngemali, ukushintshaniswa kwemali, 24/7 ukwamukela kanye nobuhle salon ne-hairdresser. Futhi lapha kunikezela ngezinsizakalo zokunakekela izingane. Ensimini lapho kukhona izitolo eziningana, izingubo zokuhlanza ezomile, ihhovisi likadokotela, i-ATM, ikhonteli le-intanethi yekhompuyutha. Ihholo lenkomfa i-Iberostar Mehari 4 * nayo inakho. Kunezintathu zazo, okucacile. Indawo enkulu kakhulu yokuhlala abantu abangu-150. Wonke amakamelo afakwe izixhobo zanamuhla futhi ahlomele ngokuphelele izinkomfa, amadili, ama-reception, njll.
Abasebenzi lapha kukhona izilimi eziningi. Abantu abasebenza ehhotela abanalo isi-Arabhu kuphela, kodwa futhi nesiNgisi, isiJalimane nesiFulentshi. Njengoba izivakashi eziye zithi lapha, ungakhulumi abasebenzi baseRussia, kodwa bazama.
Ihhotela alilona kuphela lezo zinsizakalo ezizosiza ukuhlala kwabavakashi bekhululekile. Kukhona konke okudingekayo ukuze uhlukanise isikhathi sakho sokuzilibazisa.
Kukhona amachibi amaningi okubhukuda (okunye okuvaliwe), ihholo lezemidlalo elihle kakhulu elinama-simulators, izimo zokudlala ibhasikidi ne-volleyball. Kukhona ukuqashwa kwebhayisikili, igalofu yegalufu, i-nightclub ne-jacuzzi. Nsuku zonke abenzi bokuzijabulisa bajabulelwa yi-animators, futhi kusihlwa bahlela ukuhlelwa okukhulu. I-Folklore ibonisa ngemidanso kanye nokudlala komculo kuyathakazelisa ngokukhethekile.
Engxenyeni yenkimbinkimbi kukhona zonke izimo ze-aerobics, i-tennis yetafula, imicibisholo, ukudubula ngomnsalo kanye ne-polo yamanzi. Kodwa akusikho konke. Kukhona nezinkantolo ezimbili ze-tennis ezinobunzima obunzima futhi ezinhlanu ezine-rubberized one. Futhi eduze nehhotela kune-golf enkulu enezimbobo ezingu-27, isikhungo sezemidlalo yamanzi kanye neqembu lokugibela.
Iberostar Mehari Djerba 4 * ine-SPA-isikhungo esihle kakhulu. Eqinisweni, wonke amahhotela kuleli ketane lehhotela awaziwa kakhulu nge-Welness-complexes yayo. Phela, lezi zikhungo ze-SPA zinesizotha sabo. Okufanayo - Ukubukwa kwe-Massage. Ngomlando wayo oyingqayizivele.
Wonke umuntu uyazi ukuthi massage Thai, engazange okokuqala abizwa, wavela ngaphambi Thailand ngokwayo, okungukuthi eningizimu-mpumalanga ye-Asia esifundeni. Le nqubo isasetshenziselwa izikhungo ze-SPA zohlu lwehhotela Iberostar. Kuhilela ukuhamba kwemisipha, ukwelula nokukhululwa kwamandla kusuka emathangeni, imisipha namalungu. Izikhathi eziningana - futhi umuntu uzizwa sengathi uzalwa kabusha.
Kanti futhi kunezinqubo eziningi zokuzihlakulela okunjalo: isiShayina yendabuko, isiHawaiian, isiBalinese, isi-Ayurvedic. Isithandwa kakhulu yiyindlela yezandla ezine.
Yini enye okufanele ikwazi?
I-SPA-salon yase-Iberostar Mehari Djerba 4 * isebenzisa ochwepheshe abaqeqeshiwe kakhulu ngemfundo efanele kanye nesipiliyoni somsebenzi. Izindinganiso eziphezulu ezikhwalithi ziyabonakala lapha. Phela, isikhungo senza imisebenzi yaso ngokuhambisana nezincomo ze-International Spa Association.
Kubalulekile ukuqaphela ukuthi imikhiqizo yemvelo kanye nemithamo emisha isetshenziselwa izinqubo. Ama-scrubs, massage, wraps, masks kanye nezixube zesikhungo sezokwelapha ezilungiselelwe ngokushesha ngaphambi kokuba uqale ukusebenza neklayenti. Zihlanganisa ngokulingana inani elidingekayo lezinongo, izithelo, amafutha nezithako ezingaphandle ezilethwa lapha emazweni ase-Asia. Nakuba imikhiqizo yendawo isetshenziswa kakhulu.
Kumele futhi kuqaphele ukuthi i-salon isebenzisa izimonyo ze-SPA ekhaya, eyakhiwa e-Asia yizazi ze-Ayurveda noJamu. Izivakashi ezinesifiso zingayithenga lapha. Amakhemikhali ayimvelo kanye nekhwalithi - adlulise wonke amasheke afanele futhi avunywe yi-FDA.
Ngendlela, kunezinhlangano zangasese ze-SPA zamaqembu abantu abahlanu kuya ku-10. Ukuphuza umzimba, ukwelashwa kwamanzi, isidlo esilula, ukudla okumnandi kunesimo esihle sokuphumula okuhlangene. Ngaphezu kwalokho, lapha ngamanani aphansi athengisa ukubhaliswa kwezinkampani zabantu abaningana. Ngokuvamile, okunikezwayo ku-spa kuningi - kuzo zonke kuzoba khona lapho ufika.
E-Iberostar Mehari 4 * (Tunisia) kunezindawo eziningana ezinhle kakhulu lapho izivakashi zinganelisa khona indlala yabo. Enye yokudlela ilayishiwe. Lapho khona izivakashi zinikwa izitsha ezinhle kakhulu zaseTunisia, ziphekwe ngokusho zokupheka zendabuko ezibonisiwe. Indawo yokudlela ivuliwe kusukela ngo-19: 00 kuya ku-22: 00.
Isikhungo sesibili sisebenza nsuku zonke. Kukhona izivakashi ezihanjelwa ku-buffet. Futhi bangazitholela ukuthokozisa kuphela iTunisia, kodwa futhi nokudla kwamazwe ngamazwe. Ukuze uthole ukudla kwasekuseni, indawo yokudlela ivuliwe kusukela ngo-7: 00 kuya ku-10: 00, ngesidlo sasemini - kusukela ngo-12: 30 kuya ku-14: 30, nangokwesidlo - kusukela ngo-18: 30 kuya ku-21: 30.
Futhi engxenyeni ye-Iberostar Mehari 4 * (Djerba) kunezingcingo eziningana. Lobby Melita ivula ngo-10: 00 futhi isebenza amakhasimende ayo kuze kube phakathi kwamabili. Ibha ye-beach isebenza ngendlela efanayo. Kodwa echibini eliseduze nedamu livalwa ngo-18: 00.
Ngokuvamile, njengoba izivakashi ezazivakashela zathi, izinga lokudla neziphuzo lihloniphekile. Ngisho ikhofi emshinini isiphundu. Futhi iwayini likhonjiswa ngokushesha emabhodleleni amabhodlela, abantu abaningi baseRussia abamangala. Futhi ubhiya bendawo akukubi. Iziphuzo ezidakayo ezidakayo zinikelwa kuzo zonke izindawo, futhi ziqinile (njenge-vodka, utshwala ne-cognac) - kuphela eMelita.
I-Iberostar Mehari Djerba 4 * ineamakamelo enani lezingcezu ezingu-272. Zonke zazo zifana ngokufanayo. Indawo - amamitha ayisithupha. M. Konke kuhlotshiswe ngesitayela esicwengile, njengoba ungabona ngokubuka isithombe sekamelo eliboniswe ngezansi.
Ngaphakathi kukhona imibhede emibili ephindwe kabili, kukhona ukuphuma ekhwalini lakho elinikeziwe (noma ithala), i-TV yama-plasma eneziteshi zethelethi, nesimo sezulu (ukushisa + ukupholisa) nokuphephile. Yiqiniso, iyunithi yokupaka amaphuzu iyatholakala. Kuyo - ibhuku lokugeza, isilazi, izinwele nezitifiketi zomuntu ngamunye. Ngokuvamile, imininingwane edingekayo, njengama-linens namathawula, nawo anikezwe izivakashi.
Abantu abaningi banquma ukuya ku-Iberostar Mehari Djerba 4 *. Ukuvakasha kuleli hotele kubiza ngempela intengo encane. Futhi kunenzuzo kakhulu ukuya lapha ebusika. Esikhathini esithiwa "esibandayo" (eTunisia, ungakwazi ukushisa ilanga futhi ugibele unyaka wonke) kunezivakashi ezimbalwa. Ngakho, ukuheha izivakashi, zonke izikhungo zendawo, kufaka phakathi amahhotela, ukunciphisa amanani ngesigamu.
Ngokwesilinganiso, ihhotela elinomsebenzi ohlanganisa konke lizobiza izindwendwe ezimbili mayelana nama-ruble angu-8400. Uma uthatha ibhodi lesigamu, kuzodingeka ukhokhe ama-ruble angu-5000.
Abazali ababili nomntwana wabo, "konke okubandakanya" kuzobiza ama-ruble angu-10 500 ngosuku. Kodwa izivakashi ezintathu ezikhulile zizokhokha izinhlamvu ezingu-11 400. Kuvela cishe ama-ruble angu-80 000 ngesonto. Ama-ruble ayizinkulungwane ezingu-26 kuphela. Kusuka kumuntu ukuhlala ehotela lezinkanyezi ezingu-4, futhi ngisho nangokuthi "konke okubandakanya". Futhi uma ubheka ukuthi amanani asebusika awela phansi, ihhotela ngokuzenzakalelayo liba likhangayo nakakhulu emehlweni abavakashi abangase babe khona.
Ukuhlala okungenani kunabantu abadala abayi-3. Okwesithathu, ngendleleni, ingahlala kahle endaweni ephephile. Imibhede eyengeziwe, njengezintambo zezingane, azifakiwe emakamelweni.
E-Iberostar Mehari 4 * amakamelo ahle kakhulu, isevisi ifana nokudla. Akumangalisi ukuthi kungani ihhotela lidumile. Kodwa ngaphambi kokunquma ukubhuka lapha amafulethi, kubalulekile ukukhumbula ambalwa ama-nuances abalulekile.
Uma ungena ngemvume, kuzodingeka ukuthi ulethe idiphozi ngesimo sekhadi lesikweletu noma ukheshi. Amathawula asebhishi anokuphumula awakwazi ukuthatha - akhishwa lapha. Kodwa futhi ngebheyili (amadola ayi-10). Imali nekhadi awukwazi ukukhathazeka - babuyela konke.
Ngendlela, ikhadi lesikweletu kunoma yiliphi icala lizodingeka linikezwe. Ngoba imininingwane yalo iboniswa uma wenza ukubhuka. Ungasebenzisa i- "Visa", "Master Card" ne "American Express". Into eyinhloko ukuthi ikhadi lingokwezivakashi, futhi igama eliboniswe kuso lihambisana nedatha kuphasipoti.
Ukufika, endleleni, kuqala emini. Kanye nokuhamba. Noma kunjalo kukhona ukukhanselwa mahhala kokubhuka, okungeke kwenzeke kodwa kujabule - noma yini engenzeka, izinhlelo zingashintsha ngokungalindelekile, futhi ukubhuka kwekamelo kulokhu kuzokwazi ukukhunjulwa ngaphandle kwezinkinga.
Abantu abavakashele leli hotele, shiya ukubuyekezwa okuhle. Futhi okunenjongo. Kusuka kumazwana amaningi, abahambi ababuthene kulezi zindawo bangafunda ulwazi oluningi oluwusizo oluzofika ngesikhathi sokuhlala kwabo e-Iberostar Mehari Djerba 4 *.
Isimo sezulu ngo-Agasti, isibonelo, kushisa kakhulu lapha. I-thermometer ayidabuli phansi ngaphansi kwe-32 ° C uphawu. Ilanga liyashisa. Ngakho-ke, uma ufuna ukuya lapha enyangeni eshisa kunazo zonke yonyaka, kungcono ukubeka ukhilimu esikhwameni emva / emva kokushisa kwelanga namafutha ngokushisa. Olwandle kukhona ngezinye izikhathi i-jellyfish, engashiswa.
Uma izivakashi zifika ngaphambi kokungena, zingakhishwa ngokushesha uma zikhona izindawo zokuhlala mahhala. Ngendlela, amakamelo. Zonke izinketho ngokubuka kwezilwandle zisesitezi sesithathu. Asikho ikhefu, ngoba ukuphakama akubalulekile.
Amafulethi afana nesithombe. Yonke into entsha yifenisha, amapayipi, izinto zokuhlobisa. Yini engenakuyenza kodwa injabulo.
Le nkonzo ihle kakhulu. Amantombazane ahlanzwa nsuku zonke, aguqule njalo amathawula ngelineni. Ngisho nephuzu alithathi, okumangalisa abaningi.
Yini enye izakhamuzi ezizishoyo?
Mayelana nehhotela Iberostar Mehari 4 * ukubuyekezwa kuhle kakhulu. Futhi imibono eminingi iphathelene nebhishi. Ihlanzekile futhi ivulekile, i-sun loungers kanye nama-ambulula. Ngisho ogwini uhamba ngamakamela, kodwa azinzile futhi angaphazamisi muntu - izivakashi zisetshenziselwa.
Uma ufuna ukushisa i-sunbathe ngasechibini, khona-ke udinga ukuthatha izindawo ekuseni. Phakathi nonyaka wokubhukuda, ama-sun loungers asebenza ngokushesha.
Ngendlela, uma izivakashi ziphuma ekuseni kakhulu ukuze zihambe (ngokwesibonelo, eSahara njalo zithumela ngokushesha), bese endaweni yokudlela bangathola ibhulakufesi elilula. Futhi ekamelweni lokungcebeleka, endleleni, izivakashi zinikezwa i-1.5-litre ibhodlela lamanzi nsuku zonke.
Ukunaka komuntu ngamunye kulabo abavakashile bhala izithombe. Kulapha ezingeni elihloniphekile - nsuku zonke abasebenzi bahlela into ekhethekile.
Ubuqiniso bazo zonke izibuyekezo ezisele ngehhotela, ungabona wena. Leli hhotela linemiklomelo emithathu. Izitifiketi zesigaba esiphezulu kusukela ku-TripAdvisor naseHhovisi lokuHlola, okunikezwa amahhotela atuswa amaholide omndeni. Ihotela labo lamukelwa ngo-2014 (kusuka kumthombo owodwa kanye nesibili). Futhi ngonyaka ka-2015, kutholakale impumelelo ngokuthatha isitifiketi sesithathu kusuka ku-Holiday Check.
Uma siphetha, singasho ngokuzethemba - leli hotela lizoba yisinqumo esingcono kulabo bantu abafuna ukuya e-Djerba ukuze baphumule. Ukuzisola ngokukhetha okwenziwe akudingekile. Akusizo nje ukuthi izivakashi eziningi eziye zafika lapha zinquma ukubuyela lapha futhi, kodwa esikhathini esizayo.
Ihhotela DoubleTree ngu Hilton Ras Al Khaimah 4 * (Ras al-Khaimah, United Arab Emirates): izithombe kanye nokubuyekeza
Club Ihhotela Anjelique 4 - ehhotela umndeni-run kakhulu
Kungaba ezineqhwa, noma Uphi kwazalelwa hockey?
Ubuhlungu ngaphansi ingalo
Chile: labantu, usayizi waso, ukuminyana kanye nokwakheka National
Kwangaphandle ihluzo ikhadi. abadlala phestri
Ukhulela ethunjini: okuyinto isikhathi ekuqhumeni ipayipi (ukubuyekezwa odokotela). Kwezinye isikhathi singenzeka ipayipi ukudabuka at ukhulela ethunjini
Ukugxila kwe-hyperechogenic engxenyeni engakwesokunxele senhliziyo ye-fetal: ukuxilongwa, izimbangela